Mahita an'i Bruxelles amin'ny bisikileta miaraka amin'i Olivia Borlée, Michaël R. Roskam ary Nick Ramoudt
Home » Lahatsoratra farany farany » Fanavaozana ny tanjon'ny dia » Mahita an'i Bruxelles amin'ny bisikileta miaraka amin'i Olivia Borlée, Michaël R. Roskam ary Nick Ramoudt
Vaovao Mafana Belzika • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Hospitality Industry • Vaovao • People • Sports • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Afaka andro vitsivitsy dia handray ny Grand Départ an'ny Tour de France 2019 i Bruxelles. Manohitra an'io fotoam-pankalazana io ny fitsidihan'i.brussels nanasa olona telo fanta-daza ao an-tanàna hitondra antsika amin'ny bisikileta mamakivaky ny tanàna malalany: Olivia Borlée, Michaël R. Roskam ary Nick Ramoudt dia mandray anjara avokoa.
Andro vitsivitsy sisa dia handehanana mandra-panaon'ny Bruxelles ny Grand Départ an'ny Tour de France. Ao amin'ny dingana farany amin'ny fanomanana ny renivohitra eropeana. Brussels koa dia mankalaza ny faha-50 taonan'ny fandresena voalohany an'i Tour de France an'i Eddy Merckx, ka fotoana tsy manam-paharoa ho an'ny tanàna hanome voninahitra ny bisikileta ary koa ny lova ara-kolontsaina.
Nahita avo roa heny ny isan'ny bisikileta tao amin'ny faritra Bruxelles-Capital tao anatin'ny dimy taona lasa. Niova nandritra ny taona maro i Bruxelles ary nanome toerana bebe kokoa ho an'ny bisikileta. Mbola lavitra ny lafatra ny fampitaovana fa mihatsara isan-taona ny renivohitra. Mametraka lalan-bisikileta, mamorona fijanonana bisikileta vaovao, mampitombo ny faritra 30km / ora… efa maro ny fandraisana andraikitra, na ho an'ny besinimaro na ny tsy miankina, hamporisihana ny mponina ao Bruxelles hitondra bisikileta.
Manohitra an'io fotoam-pankalazana io ny fitsidihan'i.brussels nanasa olona telo fanta-daza ao an-tanàna hitarika anay amin'ny bisikileta mamakivaky ny tanàna malalany. Mpamorona lamaody sady tompon-daka Olaimpika teo aloha Olivia Borlée, talen'ny horonantsary Michaël R. Roskam ary tompona klioba Fuse Nick Ramoudt mitaingina bisikileta isan'andro any Bruxelles. Tsy nisalasala izy ireo nanaiky ny hizara ny fitiavany an'i Bruxelles.